- Nkebi nke 2
Okwu EPA Kwụsị Iwu Ọrịre maka Wipes Disinfectant Unregistered
(Lenexa, Kan., Jenụwarị 12, 2021) - US Environmental Protection Agency (EPA) enyela iwu MJB Worldwide LLC na Hy-Vee Inc. ka ha kwụsị ire na nkesa nke nhichapụ disinfectant na EPA kwuru na ha anaghị akwado iwu gọọmentị etiti yana nwere ike ịnọchite anya ihe ize ndụ nye ndị na-azụ ahịa. “N’oge COVID-19 ...
EPA na-agbanwe akara Wipes Wipes
Lọ Ọrụ Nchedo Gburugburu Ebe Obibi nke United States (EPA) chọrọ ndị na-ehichapụ nhichapụ mmiri iji gbanwee ntuziaka akara iji hụ na ndị ọrụ njedebe na-enye ngwaahịa ahụ ezigbo oge obibi. Achọrọ ndị nrụpụta ka ha kwuo na akara nke ga-emerịrị ka elu ga-adị “mmiri a na-ahụ anya” maka ihe a chọrọ ...
Branddị CR na-ekwupụtapụta Mwepu nke nhichapụ Disinfecting
CR Brands ọkwa ọkwa Mwepụta nke ARM & HAMMER ER Ihe ndị dị mkpa ™ Disinfecting Wipes New ARM & HAMMER wi wipes ga-enye disinfection na nhicha na-enweghị kemịkal siri ike. CINCINNATI, Aug. 18, 2020 / PRNewswire / - Taa, CR Brands kwupụtara mwepụta nke ARM & HAMMER ^ ™ Mkpa ...
Clorox Atụmatụ karịa Wlat Wipes
Clorox Plans More Flat Wipes Packs After Best Year Since '98 Clorox Co. na-eme atụmatụ ụzọ ọzọ iji chekwaa shelf na afọ ọhụrụ: ịpịpụta ọtụtụ ngwugwu nke mkpocha disinfecting. Onye na - eme ọcha ọcha - nke tubị rọba nke 35 ka 75 na-ehichapụ mmiri abụrụla ihe a na - achọsi ike ...
Clorox Na-ebu Mbupu Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ Nde 1 Nde nke Wipes kwa ụbọchị
Clorox Co. na-ebuputa nhichapụ disinfecting ya ngwa ngwa ka ụlọ ọrụ nwere ike ịme ha. Ọ bụghị ngwa ngwa ngwa ngwa. Ọ bụ ezie na onye na-eme ọcha ọcha ahụ na-ezube inwe ngwa ahịa mejupụtara na ndị na-ere ahịa buru ibu n'oge ọkọchị a, mkpa a na-enwetụbeghị ụdị ya n'ọrịa ahụ niile mere ka olileanya ọ bụla ghara ịdị. Iji nagide, Clorox nwere ...
80-Count Lysol Disinfecting Wipes (Lemọn & Wayo Okooko)
Amazon nwere 80-Count Lysol Disinfecting Wipes (Lemọn & Wayo Blossom) na ere maka $ 3.68. Mbupu bụ n'efu na Prime ma ọ bụ nye iwu $ 25 ma ọ bụ karịa. Ekele dịrị Hunter daisybeetle maka ịchọta azụmahịa a. Rịba ama, Na ngwaahịa Jenụwarị 28, 2021. Banyere ngwaahịa a: Na-egbu 99.9% Nje Virus & Bacteria, gụnye ...
Ebe ịzụta wipes na disinfectants ọcha electronic
-Ọ na-atụ aro na nchịkọta akụkọ nke okwu onwe ha họrọ. Gị ịzụrụ site na anyị njikọ nwere ike irite anyị isslọrụ. Maara na n’oge ọrịa coronavirus, ị ga-akwọ aka gị ma tinye ihe mkpuchi iji mee ka ị dị ọcha, mana kedu maka ekwe ntị na ngwaọrụ elektrọnik ndị ọzọ? N ...
Ọ ka siri ike ịchọta Purell na-ehichapụ na ụlọ ahịa, mana ọ bụrụ na ị na-eme ọsọ ọsọ ka ị nọrọ na ngwaahịa na Amazon
Ọ bụrụ na ịzụta ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ nyochara nke onwe site na njikọ dị na weebụsaịtị anyị, anyị nwere ike ịnweta ọrụ ndị otu. Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ otu afọ mgbe ọrịa ọrịa coronavirus malitere, ọ ka na-esiri ike ịchọta ihe ụfọdụ dị mkpa, dị ka Purell hand sanitizer na Clorox wipes, n'ọtụtụ st ...
Nlekọta onwe onye na-ehichapụ ahịa, na-agba akaebe buru ibu n'oge oge amụma nke 2020-2027
Nlekọta nlekọta onwe onye a na-ehichapụ na-ehichapụ akụkọ ahịa ga-ekpuchi akụkụ niile dị oke ọnụ na ọnụ ọgụgụ, gụnyere nha ahịa, atụmatụ ahịa, ọnụego uto na amụma, yabụ ị ga-enwe nghọta zuru oke banyere ahịa ahụ. The nnyocha na-agụnye a zuru ezu analysis of ahịa ọkwọ ụgbọala, const ...